Tour – Somali Collage
Markaad timaaddo dukaan aanad la kulmin caqabado luqadeed, oo aad sheegi karto waxaad rabto oo qofka meheradda uu ku fahmayo, wax walba waxay ka dhigayaan mid raaxo leh.
— Mahadi Xassan Moussa oo ka hadlaya Dukaanka Xalaal ee Bulshada
Qof kasta oo furay meherad, waxaad u furaysaa qoyskaaga, lacagtaada. Laakiin qoyskaas waxay caawiyaan qof walba. Markaa ma aha dukaan. Waa dukaan bulsho.
— Axmed Cumar oo ka hadlaya Dukaanka Xalaal ee Bulshada
Had iyo jeer waxaan ku hamiyi jiray tan iyo markii aan yaraa inaan naftayda u shaqeeyo. Waxaana rabay inaan taas gaaro si aan xoriyad badan u helo oo aan si uun ugu bixiyo nafteyda iyo bulshada isla mar ahaantaana. Way adag tahay sababtoo ah waxaan had iyo jeer u shaqeeyaa si adag noloshayda, had iyo jeer waxaan ka shaqayn jiray laba shaqo.
—Muyisa Mutume, milkiilaha, M. Square Vermont
Vermont way fiican tahay, wayna wanaagsan tahay inaad timaaddo oo aad dhaqan kale dhexgasho. Laakin in la haysto meel yar oo ku xasuusin karta guriga waa mid aad muhiim u ah, waxaana u maleynayaa inay tahay wax aad u xun haddii aan halkan ku haysan wax sidan oo kale ah.
—Faraja Achinda oo ku taal M. Square Vermont
Waxaanan uga mahadcelinayaa bulshada taageerada safarka oo dhan. Waa axsaan laba dhinac ah, aniguna halkan ayaan u joogaa, laakiin waxba lama samayn lahaa macaamiishayda la’aanteed. Kaliya mahadsanid, waxa waddanku [aniga] ka yimid iyo nooca hami ku noolaanshaha.
—Dado Vujanovic, milkiilaha, Suuqa Yurub
Caadi ahaan waxaan u tagnay inaan wax ka soo iibsanno Kanada, laakiin maadaama ay ka furmeen suuqan oo ay la mid tahay Covid, waxaan u maleynayaa inay aad noogu fiican tahay. Waxay kaloo iibiyaan alaab wanaagsan sida alaabtii wadankeenii oo kale.
—Francis Mabawidi oo jooga M. Square Vermont
Marka uu macmiilku soo galo dukaankayga, waxaan waydiiyaa, “Maxaad jeceshahay?” Wuxuu ii sheegay, “Waan ka helay shaygan.” Waxaan keenay shaygan. Gobol kale ayaan ka dalbeeyaa, Google-ka ayaan ka raadiyaa, meel kasta oo ay joogto waan ka helaa, waxna waan keenaa. Waxaan u keenaa saliid kasaafada. Wax walba.
— Axmed Caref, maareeyaha Suuqa Caalamiga ah ee Nada
Dhammaanteen waxaan halkaan u joognaa nolol wanaagsan, hamiyo, waxaanan u baahanahay inaan isku taageerno si kasta oo suurtagal ah oo aan awoodno. Waxaan halkan imid anigoo 18 jir ah, anigoo tahriib ah, waxaanan noqday muwaadin. Waxaan dareemayaa xiriir sababtoo ah waxaan ogahay waxay soo mareen markay halkan yimaadaan.
—Isela Marin O’Brien oo ku taal Suuqa Nepali RGS
Tani waa kala duwanaanshaha uu dalkani ku dhisan yahay, waana dad ku cusub, waxayna keeneen dhammaan dhaqankan cajiibka ah. Waxa ay keenaan uun baa hodmiya oo hanti badan u keena Maraykanka. Nimankani waa Ciraaqiyiin, laakiin waxay cunto ka keenaan adduunka oo dhan, adduunkooda. Suuqyadani waa kuwo cajiib ah, way qurux badan yihiin, runtii waan jeclahay iyaga.
—Qarsoodi ah Suuqa Caalamiga ah ee Nada
Mashruucii in ka badan suuqa waxa lagu wargeliyay hab wax-is-waydiineed oo loo yaqaan iskaashi qawmiyad. Laga soo bilaabo fikradda mashruuca ilaa shaqada goobta si aan u soo bandhigno horumarka, waxaan raadinay inaan khibrad ka fahanno dhinaca kuwa ay khibradaasi leedahay. Go’aamo ayaa la sameeyay iyadoo lala kaashanayo milkiilayaasha suuqa iyo macaamiisha. Xaalad kasta, waanu raacnay hagitaankooda oo waxaan rabnaa inaan wadaagno erayadooda, sawiradooda, ama magacyadooda-ama- ahayn-sida ay doorteen.Qoraaga mashruucan waa dadka aad afkooda iyo wajigooda aad ku arkayso halkan.
Waxaan isticmaalnaa ereyada “soo galooti” iyo”qaxooti” sababtoo ah waa kuwo xaqiiqo ah, oo qeexaya dhacdo da’weyn- dhaqdhaqaaqa ikhtiyaari ah ama qasabka ah ee dadka aduunka oo dhan. Erayga :Mareykanka cusub” waa ku raaxo u leh qaar, lakiin way ku yar tahay kuwa kale. Erayada mid ka mid ah shuraakayaasha suuqa, in loogu yeero “cusub”Ameerikaanku waxay dareemayaan in loo laabo nooc kale oo Maraykan ah.